Dhuuqamada galmada ka hor oo xoojisa Awooda Raga iyo in ay biyaha Dib u dhacaan | shumis.net
Home » galmada » Dhuuqamada galmada ka hor oo xoojisa Awooda Raga iyo in ay biyaha Dib u dhacaan
Dhuuqamada galmada ka hor oo xoojisa Awooda Raga iyo in ay biyaha Dib u dhacaan
Dhunkashada ayaa ah mid caalamka oo dhami isku raacay in labada xiriir ka dhexeeyo isku tusaan jacaylka ka dhexeeya iyo xiisaha ay isu qabaan. Laakiin, waxa jirta in si sahlan loo iloowo habkan fudud ee keenaya raaxo iyo dareen aad u badan.
Dhunkashada ayaa noqon karta mid u furta lamaanaha is jecel raaxaysi dareen badan ama isku tusaan in ayna intaa wax kabadan dhexdooda ka dhacayn. Si kastaba ha ahaatee waxa ay sheegtay khuburada galmada Fox News, Yvonne Full bright in ay muhiim tahay in aad loogu fiirsado dhunkashada.
Dhunkashada ayaa waxa ay tahay mid aan muujinayn oo kaliya in lamaane isqabaa ay ku midoobayaan ayagaa oo dibnaha isa saaraya, laakiin ay muujinayso in ay isleeyihiin oo ay xoojinayso dareenka jacayl ee ka dhexeeya, ayay tiri Yvonne Fullbright.
Dhunkashada dheer ayaa waxa jirku sii daynayaa dheecaanada testosteron, dopamin iyo oxytocin kuwaas oo lagu sheego in ay qofka siiyaan in uu dareemayo dabacsanaan raaxo leh.
Yvonne Fullbright ayaa waxa ay ku talisay in uu qofku ka fikiro sida uu waxa u dhunkanayo ama loo dhunkanyo, taas oo lamaanuhu inta badan ay ilaabaan in ay iska war galiyaan.
Waxa kale oo ay ku dartay Yvonne in ay haboon tahay in ay su’aashaas iswaydiiyaan lamaanhu. Kadib marka laga wada xaajoodana, labilaabo sidii loo tababaran lahaa.
Ogoowoo! Tababar badan waxa lagu gaaraa meel dheer,e.
Gabadha khuabiirka ah waxa kale oo ay ku talisay in hal habeen lagu wada raaxaysto dhunkasho gaaban, mid dheer iyo salaaxid kaliya si loo qaato tababar dheer.
Dibnaha oo idin daalo mooyee, halkaa waxa aad ku arki doontaan dhunkasha dhinacyadeeda kala duwan iyo idinka oo ka hela dareen ah: Maxaa dhunkashadan aan wadnaa ku dambayndoontaa, ayay tiri Yvonne Fullbright.
Hadaba sidaa iyo raaxaysi wacan lamaanayaal
Title: Dhuuqamada galmada ka hor oo xoojisa Awooda Raga iyo in ay biyaha Dib u dhacaan
Posted by galmada Net, Published at December 13, 2015 and have 0 comments